Iphupha malunga noMgibe weRat Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umgibe weempuku usetyenziselwa ikakhulu ukulwa neempuku, kuba azinako ukutshabalalisa ukutya kuphela kwaye zibangele nomonakalo, kodwa zikwasasaza izifo. Yiyo loo nto ezi zilwanyana zihlala zibonwa "njengeentshaba" zabantu, nangona zizilwanyana ezikrelekrele kakhulu.
Kwimeko yomgibe wezilwanyana, nokuba yimpuku okanye umgibe wempuku, kungenziwa umahluko phakathi kwezixhobo ezibulala into ephilayo nezo zibambisa isilwanyana siphila. Lo mahluko ungasetyenziswa njengenkcazelo eyongezelelweyo xa utolika amaphupha. Ke ngoko, imiba "yesilwanyana esifileyo" isimboli yamaphupha kufuneka nayo ithathelwe ingqalelo.
1 Uphawu lwephupha «umgibe wempuku» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umgibe wempuku» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umgibe wempuku» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umgibe wempuku» - ukutolikwa ngokubanzi
Umgibe weempuku njengophawu lwephupha unokuthi, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, isalathiso ku Amandla okwenza izigqibo. ukuhlangula umphuphi. Ngoku ukulungele ukwenza into malunga nomcimbi othile xa uvukile okanye uthathe isigqibo esibalulekileyo malunga nengxaki.
Ukuba iphupha ngokwakhe liwela kumgibe weempuku ephupheni lakhe, kungekudala uza kuphulukana nento ebalulekileyo okanye enexabiso. Ke ngoko, le meko yamaphupha nayo inokusetyenziselwa uphaphile ukululeka kwi el mundo ukuvuka. Ukuba ubona omnye umntu ekulo mgibe, oku kungabonisa indlela yakho yobuqhetseba.
Umgibe ongenanto ongenanto njengomfanekiso wephupha ufuna ukubonisa umphuphi ukuba akanalo ukhuphiswano nabanye ukuba boyike kwilizwe lokwenyani. Ukuba umntu oleleyo waphula umgibe weempuku okanye wayesele enesiphene ephupheni, kufuneka alungiselele ukuphela kwebond. Kodwa kuba oku kwakungonwabisi kuye, i Ukwahlulahlula ayibonwa njengentlungu.
Nabani na obeka umgibe wokubamba iimpuku ephupheni lakhe ngokubanzi uthathelwa ingqalelo kumayelenqe kwaye Ubuqhetseba Iintshaba zakhe ebomini bokuvuka. Ngokuchasene noko, ukuphupha kuyakuqonda oku ngexesha kwaye kungakuphazamisa.
Ukutolikwa okwandisiweyo kwephupha lomgibe weempuku, i indawoapho ibekwe khona inokuba nomdla. Umgibe weempuku kwigumbi elingaphantsi, umzekelo, unokubonisa uloyiko lwomphuphi ngekamva. Okanye ngaba lo mgibe wawuza kubonakala kwigumbi eliphezulu? Emva koko kuya kufuneka ujongane nenkumbulo ethile.
Uphawu lwephupha «umgibe wempuku» - ukutolikwa kwengqondo
Uhlalutyo lwengqondo lwephupha libona kumfanekiso wephupha "umgibe weempuku" umqondiso kulowo uleleyo ukuba akazukufamekiswa kukuvela kwabanye, kodwa ngowakhe ukuthandabuza kwangaphakathi ndimamele. Kuba xa ungayenzi loo nto, uya kuzenzakalisa.
Ukubamba i-rat kumgibe onjalo okanye ngokunokwenzeka ngombulali ephupheni kufanekisela ukuzikhusela kwimeko enokuba yingozi. Omnye uba ngumntu kwihlabathi lokuvuka ngqu zulwano isenokucinywa ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo, ukuba ubambe imouse kwisibatha seempuku ngelixa ulele, akufuneki unike kakhulu umdla wayo wokufuna ukwazi kwinqanaba lokwenyani. Kuba oku kunokukubeka kwimeko encomekayo.
Kutoliko lwengqondo "lomgibe wempuku" isimboli yamaphupha, umbala wempuku ebanjiswe ephupheni nayo ibalulekile. Umlinganiso omnyama, umzekelo, ubonakalisa utshintsho oluzayo, emhlophe ihlala ivelisa impumelelo kwindawo yentengiso.
Uphawu lwephupha «umgibe wempuku» - ukutolika kokomoya
Kubonwa ngokwembono egqithileyo, uphawu lwephupha "umgibe weempuku" unokusetyenziselwa Ukuthobeka Bongoza xa kufikwa kuncedo lokomoya kunye noncedo lwabanye.